Magaaladee ku xigi doonta Galgala? | allsanaag
Magaaladee ku xigi doonta Galgala?
7th December 2021 admin Category :
Magaaladani waxay ka mid ahayd degaanaddii Saladanaddii Warsangeli ay ka atalin jirtay qarniyada , maantana xoog ayaa lagu haystaa dadkeediina waa laga Barakiciyey, oo maanta waxay dul saaran yihiin oo ay la nool yihiin Bulsho kale oo aan wax badan dhaamin, oo iyaguna ku nool Dhul laysku haysto oo cuna qabatayn dhaqaale saaran yahay
Magaalada Galgala ee gobolka Bari, dhowr sano ka hor waxay ahayd magaalo camiran oo dad badani ay ku nool yihiin. waxay ahayd magaalo dadka ku nooli ay beeran jireen moocyada kala duwan ee dalagyada la beerto. Waxay ahayd magaalo nabadeed.
Maanta dadkii ku noolaa xoog ayaa looga barakiciyey, dalagii ka bixi jiray oo ay caanka ku ahaydna, oo lagu soo tabcaayey sanadaha badan kibir ayaa dab loo saaray. Guryihii bulshada reer Galgala dhisteen si ay ugu nolaadan, oo caruurtooda ugu korsadaaan sanadka 12kiisa bilood . Lix bilood alshabaab ayaa degan lixda bilood oo kalena Ciidamo la sheegay inay la dagaalamayaan Alshabaab ayaa degan.
Maanta sawirka dhabta ah oo si tuugnimo looga soo qaaday Galgala waa kan:
SNM iyo Marabbidoodu nasan maayaan ilaa magaalo kasta ee reer Maakhir ay sida Galgala oo kale ka dhigan
← Puntland oo beenisay Hadal kasoo yeeray SNM Dagaal Xudun Ku Dhexmaray dadka Deegaanka Iyo Maleeshiyada SNM. →